Mareykanka oo qirtay in labo qof oo shacab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya sanadkii 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo qirtay in labo qof oo shacab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya sanadkii 2018
Mareykanka oo qirtay in labo qof oo shacab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya sanadkii 2018
April 5, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxa Taliska Mareykanka ee Afrika Janaraal Thomas Waldhauser. [Xigashada Sawirka: AFP]
Washington-(Puntland Mirror) Taliska ciidamada Mareykanka ayaa maanta oo Jimce ah qirtay in labo qof oo shacab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya sanadkii 2018.
Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in duqeyntaas lagu dilay labada qof ee shacabka ah ay ka dhacday meel u dhow magaalada Ceel Buur ee gobolka Galgaduud.
Bishii lasoo dhaafay, haayada Amnesty International ayaa warbixin ay sii deysay ku eedaysay ciidamada Mareykanka in ay dad shacab ah ku dileen duqeymo ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
AFRICOM ayaa bayaankooda ku sheegay in duqeynta ay ku dhinteen dadka shacabka ah aysan ahayn kuwa ay warbixinteeda ku xustay Amnesty International.
Tan iyo sanadkii 2017, ciidamada Mareykanka ayaa ku dhawaad 110 duqeymood ka fuliyay gudaha Soomaaliya oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab.
March 20, 2019 Haayada Amnesty International oo sheegtay in dad rayid ah lagu dilay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya
February 13, 2020 Amnesty International oo sheegtay in wariyeyaasha Soomaaliya aysan bartilmaameedsan Al-Shabaab oo keliya, balse ciidanka dowladda
Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la magacaabay
Madaxweyne Deni: Dilkii Paul waxa uu u soo jiiday Puntland dhaawac aad u badan
Erdogan oo walaac ka muujiyay xiisada u dhaxaysa Mareyanka iyo Waqooyiga Kuuriya
Istanbul-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa rajeynaya in xiisada sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya aysan sababi doonin dagaal la isku adeegsado hubka wax gumaada ee nukleerka, sida uu sheegay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan [...]
Kenya oo wadahadalo ka bilaabi doonta sidii ay ciidankeeda ugala bixi lahayd Soomaaliya
Nairobi-(Puntland Mirror) Dowladda Kenya ayaa maalmaha soo socda bilaabi doonta wadahadalo ka bixista ciidankeeda Howlgalka Midowga Afrika (Amisom), sida uu qoray wargeyska Daily Nation oo xaruntiisu tahay magaalada Nayroobi. Wadahadalada oo ay hoggaamin doonto Wasiirka [...]
Ciidamada amniga maamulka Galmudug oo soo badbaadshay dooni ganacsi oo laga leeyahay Hindiya, balse burcadbadeeda ayaa ka xaystay sagaal katirsan shaqaalaha doonta saarnaa
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ayaa weerar ku qaaday soona badbaadshay dooni ganacsi oo laga leeyahay dalka Hindiya taasoo ay afduub u haysteen burcadbadeeda Soomaaliya, balse burcadbadeeda ayaa markii ay cararayeen dhanka beriga u [...]